Tafatafa miaraka amin'i Patrick Andy manolotra ilay raki-tsary vaovao "Ny tsintsina aza ahiany" | POPMUSE.MG
Tafatafa miaraka amin’i Patrick Andy manolotra ilay raki-tsary vaovao « Ny tsintsina aza ahiany »
23 Mar 2016 par Joseph R. 3279 POPs
Araho eto indray ny resadresaka sy fifampizarana niarahana tamin’i Patrick Andy momban’ny raki-tsary navoakany farany mitondra ny lohan-teny hoe » Ny tsintsina aza ahiany » izay mirakitra teny soa sy fahendrena tokoa ary anasany ny tsirairay mba hihaino sy hankafy izany (toa anay ato amin’ny POPMUSE )
Miarahaba indray an’i Patrick Andy ! Tsy ela izay namoaka raki-tsary ianao, afaka lazainao kely ve ny momban’io rakitsary io?
Miarahaba antsika ato amin’ny POPMUSE.
Eto am-pikarakarana ny album vaovao aho ankehitriny. Tokony hivoaka afaka volana vitsivitsy ilay izy, dia manomboka mikarakara publicite vitsivitsy aho. Dia nisy namako atao hoe Michelle Margiotta vao nanomboka nianatra manamboatra rakitsary, dia izy nanontany ahy raha liana aho ny hiara-miasa aminy. Mazava ho azy fa liana tanteraka aho, satria izaho koa moa eo am-pikarakarana publicite rahateo. Ity hira hoe “Ny tsintsina aza ahiany” ity dia ao amin’ny album-ko vaovao, fa ny zandriko vavy – Mamie – no mihira azy io.
Koa satria i Mamie lavitra ahy no mipetraka, dia tsy maintsy hoe izaho izany no hihira io hira io rehefa live, dia mila arrangement vaovao an’io hira io aho izany. Dia avy eo aho nieritreritra aho hoe ity hira ity angamba tonga dia mety hatao rakitsary, satria sady hira ao amin’ny album-ko ilay izy, moa azo lazaina hoe hira vaovao ihany koa satria ilay arrangement somary misy maha-samy hafa azy kely.
Misy hafatra manokana ve ambaran’io raki-tsary io? ary ho an’iza izany?
Misy hafatra manokana mihintsy amin’io, ary tsotra ihany ilay izy: na inona na inona no mitranga amintsika, raha toa ka eo am-pelan-tanan’ Andriamanitra ny fiainantsika, dia na mandalo olana goavana aza isika dia tsy maninona.
Izany hoe mora ny miteny an’izany, fa sarotra ny mandalo azy rehefa tonga tokoa ny olana goavana, kanefa dia marina mihintsy fa raha eo am-pelan-tanany ny fiainantsika dia manamaivana ny fisedrana ny olana tanteraka izany.
Ho an’ny olon-drehetra ilay hafatra no tena tanjoko, indrindra raha mandalo olana mafy ianao ankehitriny. Raha toa ka milamina tsara ny fiainanao ka tsy dia misy probleme, dia ankafizo fotsiny ary aloha ity mozika ity amin’izao, fa tadidio ity tonon-kira ity rehefa sendra tonga ny olana goavana
Misy antony manokana ve nisafidiananao sy nandikana amin’ny fiteny malagasy ity hira ity?
Araka ny voalazako teo aloha dia mikarakara album vaovao aho ankehitriny. Hira noforoniko ny ankamaroan’ny ao amin’io album io, fa misy hira roa ankafiziko koa noforonin’olon-kafa (“He’s been faithful” ny iray, nosoratan’i Carol Cymbala, dia “Total Praise” ny iray, nosoratan’i Richard Smallwood). Tiako hampiana hira iray farany hatao “Bonus Track”. Dia tadidiko fa tamin’izaho mpianatra tao amin’ny Lycee Gallieni dia nisy namako ni-inviter ahy hijery concert-na choral, dia nihira an’ny “Ny tsintsina aza ahiany” rizareo. Tsy fantatro tamin’izany hoe hira teny Anglisy anie izy ity no nadikan-drizareo teny Gasy, fa raikitra tato an-dohako ny feony sy ny tonon’ny Refrain-n’ilay hira.
Nony nieritreritra aho hoe hanampy hira iray hatao “Bonus Track” amin’ny album vaovao, dia ity hira ity no tonga tato an-dohako. Dia nanontany olona vitsivitsy tany Madagasikara aho hoe mba hitadiavo ny tonon’io hira io amin’ny teny Malagasy ange azafady. “His eye is in the sparrow” no loha-teniny amin’ny teny Anglisy, fa tsy fantatro hoe iza no nandika azy amin’ny teny Gasy. Tamin’ny voalohany saika hoe izaho no hihira azy tamin’ny album, kanefa nandalo teto New York tampoka ny zandriko vavy – Mamie -. Ny feony tsara lavitra noho ny ahy, dia niangaviako izy mba hihira ilay izy.
Nanao ahoana ny fandikana azy tamin’ny fiteny Malagasy?
Tsy fantatro hoe iza no nandika azy io amin’ny teny Malagasy. Raha tsy diso aho dia ny Adventista any amintsika mihira azy io amin’ny teny Gasy. Eto Etazonia ny ankamaroan’ny fiangonana mihira azy io amin’ny teny Anglisy satria hira efa taloha be ilay izy.
Ahitana mpitendry hafa maro ao ami’ilay rakitsary, afaka lazalazaina ve ny momba azy ireo?
Tamin’ny voalohany saika hataoko “Trio” fotsiny ilay video: izaho amin’ny gitara basy, Nathaniel Townsley amin’ny bateria, dia Adan Perez amin’ny “Rhodes”.
Adan dia efa namako hatramin’izay vao nifindrako monina teto Etazonia. Eo amin’ny sehatry ny Jazz sy Latin Jazz izy no tena fantatra. Nathaniel Townsley indray dia batteur anisan’ny malaza eto Etazonia – sy any ivelany -, miara-mitendry na nanao enregistrement niaraka tamin’ny Joe Zawinul, Richard Bona, Mariah Carey, Alejandro Sanz, ….
Efa an-taonany maro koa no nahafantarako an’i Nathaniel, ka fantako izy fa tsy mila repety fa tonga fotsiny ao amin’ny studio dia afaka mitendry io hira io. Herinandro vitsivitsy talohan’ny enregistrement tany amin’ny studio aho dia nitendry mozika Malagasy tany amin’ny fety tany Manhattan. Dia Harry Vaughn no nitendry percussion. Izy anefa batteur no tena izy, mitendry bateria amin’ny tarikako izy, ary koa mitendry hira vitsivitsy amin’ny album-ko vaovao. Fa tamin’izy nitendry percussion dia nasiany korintsana kely tamin’ny rantsan-tanany, dia tena ohatra ny mety be amin’ny Salegy ilay izy, dia nanontaniako izy raha afaka mi-enregistrer ilay rakitsary miaraka amiko.
Nisy fotoana manokana nanamarika anao ve nandritra ny fanatontosana ity rakitsary ity ?
Teo am-pikarakarana ny enregistrement an’io rakitsary io aho no nahare vaovao ratsy avy any Madagasikara, andro vitsivitsy talohan’ny Krismasy 2015, fa nodimandry ny raiko. Vao maika ilay tonon-kira lasa nisy dikany be tamiko. Ilay malabary nanaovako amin’ny rakitsary dia ny dadako no nanjaitra azy
Inona no azonao zaraina momba ny tetikasanao ho avy ?
Eo am-pitadiavana olona hiara-miasa amiko mihintsy aho izao hamoaka ny albums-ko any Madagasikara. Enga anie ka ho tanteraka. Ankoatran’izay dia hitendry etsy sy eroa miaraka amin’ny tarikako aho, ary koa mivezivezy miaraka amin’ny tarika hafa. Maro koa ny olona no nangataka rakitsary hafa, ka hiezaka hamoaka rakitsary vitsivitsy aho ao aoriana.
Mankasitraka feno an’i Patrick Andy hatany !
Patrick Andy: Bass and Vocal,
Nathaniel Townsley: Drums,
Harry Vaughn: Percussion,
Adan Perez: Rhodes.
Recorded by Patrick Pelissier at Flux Studio (Manhattan)
Michelle Margiotta: Video recording and editing,
Adana Atkinson: Video recording,
Audio mixed by: Eli Menezes
"Ny tsintsina aza ahiany" aka "His eye is on the sparrow" (composed by Charles H. Gabriel, English lyrics by Civilla D. Martin)
A different version of this song is on Patrick Andy's new album, with his sister "Mamie Adrienne" on Vocal
bassiste malagasypatrick andypatrick andy bass
Écrit par Joseph R. (51 articles)
Contributeur POPMUSE, amoureux de l'art, culture et musique de Madagascar, je désire vous partager cette autre richesse de mon pays. Suivez-moi sur facebook @fh.rakoto, twitter @fh.rakoto
Voir plus de BUZZ (51+)
3299 pops |   Partager
2145 pops |   Partager
2421 pops |   Partager
3 401 813 pops